Tag: ọgbọ y | Martech Zone
Kpido: ọgbọ y
Ọ bụ ihe zuru oke nye m ka m na-asụ ude mgbe m hụrụ ụfọdụ isiokwu na-ekwutọ Millennials ma ọ bụ na-ekwu okwu nkatọ ndị ọzọ dị egwu. Agbanyeghị, enwere obi abụọ na enweghị ebumnuche omume ebumpụta ụwa n'etiti ọgbọ na mmekọrịta ha na teknụzụ. Echere m na ọ dị mma ikwu na, na nkezi, ọgbọ ndị okenye anaghị ala azụ ịkpọte ekwentị ma kpọọ mmadụ, ebe ndị na-eto eto ga-awụli elu na ozi ederede. N'ezie, anyị nwedịrị onye ahịa nwere
N'afọ gara aga, anyị kesara ihe ọmụma dị ịtụnanya nke nyere akụkọ ịre ahịa email 7. N'uche m, email na-aga n'ihu ịbụ otu n'ime usoro nkwukọrịta akpọrọ akpọrọ, nke ejighị ya na nke emegburu emegbu nke ndị na-ere ahịa nwere n'aka ha. Oge a, Email Monks edepụtarala aha 15 akụkọ ifo email ama ama wee debe ha n'echiche ndị ezi uche dị na anyị "Email Marketing Myth Busting" Infographic. Ihe omuma ihe omuma a na-eme ka anyi mata eziokwu nke bu akuko ifo a